Madaxwaynaha Turkiga oo hanjabaad u jeediyay Maraykanka iyo Israel | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwaynaha Turkiga oo hanjabaad u jeediyay Maraykanka iyo Israel
Madaxwaynaha Turkiga oo hanjabaad u jeediyay Maraykanka iyo Israel
Madaxwaynaha Dowladda Turkiga Raccep Tayyip Erdogan ayaa maanta oo Tallaado ah sheegay in Dowladda Turkiga ay xiriira iyo cilaaqaadka dib kuma adiga seed ay u jari doono Dowladda Israel haddii Dowladda Maraykanka ay magaalada Qudus u aqoonsato Caasimadda Israel.
Madaxwaynaha Turkiga, waxaa sheegay in tallaabada madaxwaynaha Maraykanka uu Ku doonayo inuu Ku aqoknsado Magaalada Qudus ay tahay tallabo ay si Sharci ah uga falcilin doonaan dunida Islaamka.
” in madaxwaynaha dalka Maraykanka uu magaalada Qudus u aqoonsado Caasimadda Israel, waxaa ay la micno tahay in Maraykanka uu ka soo tallaabayo qadka Cas ee Islaamka” ayuu madaxwaynaha dalka Turkiga Raccep Tayyip Erdogan uu yiri xilli uu ka hadlayay xaaladda Magaalada Qudus.
Madaxwaynaha Maraykanka, ayaa lagu wadaa in isbuucan gudihiisa uu go’aansado in Maraykanka uu Qudus u aqoonsanayo Caasimadda Israel.
Donald Trump, madaxwaynaha dalka Maraykanka, ayaa xilligii olopihiisa doorashada sanadkii hore waxa uu balan qaaday in safaaradda Maraykanka ee Israel uu u rari doono Magaalada Qudus.
Qaar ka mid ah hogaamiyaasha dowladaha ugu tunka wayn Caalamka oo uu ka mid yahay madaxwaynaha dalka Faransiiska Emanuel Macron ayaa qadka telfoonka kula hadlay Donald Trump ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid dhaawacaysa nabadda Barriga dhexe iyo waanwaanta nabadeed ee laga dhex wado maamulka Falastiin iyo kan Yahuudda.
Previous articleShirk madaxeedka GCC oo xiritaankiisa maalin laga soo hormariyay
Next articleUSAID iyo dowladda Soomaaliya oo saxiixday heshiis Malaayiin Doolar ku kacaya (Sawiro)